2013 May : Oromo Democratic Front
Ergaa Gulaalaa ejjennaa imaammata ADO – May 29
Posted by ODF on May 29, 2013 · Leave a Comment
Yeroo ammaa kanatti haalli siyaasaa Ethiopia keessatti mul’atu, baayyee wal xaxaa, yaaddeessaa fi xumurri isaa maal ta’uu akka malullee tilmaamuun kan nama rakkisu ta’aa jira. Addi Dimokiraatawaa Oromoo (ADOn) akka dhaaba siyaasaa rakkoowwan uummata Oromoos ta’ee kan biroo waggoota dheeraadhaaf turaniif furmaata waaraa argamsiisuudhaaf dhaabbate tokkootti waan biyya sana keessatti adeemaa jiru dhiyeenyaan hordofa. Har’a biyya Ethiopia keessatti kanneen gaaffii mirgaa gaafatan, gaaffii mirgaa gaafachuu isaanii qofaan qamaa fi qalbiin bakka jiran hundaatti dararamaa jiru, itti dabalees mirgi, bilisaan yaada ofii ibsachuu, amantii barbaadan akka barbaadanitti hordofuu, mirgi dubbisuu fi barreessuu, mirgi qooda fudhannaa dhaabbii siyaasaa uggaramee jira. Itti dabalees…
Dhalootaa fi Imala Adda Dimokraatawaa Oromoo
Posted by ODF on May 22, 2013 · Leave a Comment
Dhaggeesffattoota keenyaa Dhalootaa fi Imala Adda Dimokraatawaa Oromoo mata duree jedhu jalatti qopheen nuti fudhannee dhihaanne, Bu’ureeffama Adda Dimokraatawaa Oromoo fi deemsa isaa fuula duraa irratti hubannaaf qophee dhihaatee dha. Akkuma beekamu Addi Dimokiraatawaa Oromoo maqaa amma qabu kana qabatee osoo as hin ba’inii fi waltajjii Marii Oromoon beekamaa turetti, ganna tokko darbe kana keessa qorannaa fi maree bal’aa taasisaa ture. Qorannaa fi mare isaa kanaanis Qabsoon bilisummaa Oromoo baroota dheeraaf deemaa turee ABO dhalche , waggoota afurtaman darban keessatti wareega heedduu baasee, bu’aa hin tuffatamni argamsiisellee rakkoo keessaan qabamee gaadi’amee of dura tarkaanfachuu dadhabuu ta’ee arge. ABO dhibee keessaan qabamee, waldhabee,…
Kaayyoon Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO)
Kaayyoon Adda Dimokiraatawaa Oromoo (ADO) ummatni Oromo bittaa halagaa jalaa bayee, biyya ofii irratti abbaa biyyummaa isaa deebifatee, mirga guutuu qabaatee ofiin of bulchaa, mootummaa biyyoolessaa Itiyoophiyaa keessatti ammoo uummattoota biyyittii kan fedhii fi hawwii sirna diimookiraasii jalatti buluu qaban hunda waliin ta’uudhaan mootummaa Federaalaa kan sirna diimookirasii dhugaatiin gaggeeffamu ijaaruudha. Isa kana dhugoomsuunis Oromoon akka saba guddaa hundee biyyittii ta’e tokkootti aangoo polotikaa isa fakkaatu akka qabaatu taasisuudhaaf qabsaawuudha. Kana jechuun biyyi/lafti Oromiyaa handhuura biyyittii, qabeenyi Oromiyaaa utubaa diinagdee biyyittii, sabni Oromoo immoo madaaluma kamiinuu uummata guddaa waan ta’eef dhimmi Oromoo ilaalu sabaaf sab-lammoota biyya sanaa hunda karaa gara…
Raadiyoo Adda Demokiratawaa Oromoo (ADO)
Posted by ODF on May 15, 2013 · Leave a Comment
Raadiyoo Bilisummaa Oromoo (RBO) jedhamee kan moggaafame Raadiyoon Adda Dimokiratawaa Oromoo harra Caamsaa 15 bara 2013 irraa jalqabee qilleensarra ooluuf jira. Raadiyoon Bilisummaa Oromoo(RBO)n Adda Demokiratawaa Oromoon qophaawee ammaaf torbanitti guyyaa tokko, guyyaa Roobii sa’a tokkoof afaan Oromoon tamsaasa isaa jalqabuuf jiru RBOn, hawaasa Oromoo adunyaa guutuu keessa jiraataniif sagantaa isaa dhiheessa. Raadiyoon Bilisummaa Oromoo sagantaa isaa kana keessatti sochii Addi Demoikraatawaa Oromoo gaggeessuu fi walii gala qabsoo sabani Oromoo mirga isaa deeffachuuf taasisu irratti kan xiyyaafatu yoo ta’u, itti dabalees, aadaa, seenaa fi ogbarruu Oromoo irratti gad fageenyaan hojjeta. Tamsaasi Raadiyoo Bilisummaa Oromoo ammaaf kara marsaa interneetii Adda Demokiraatawaa…